चीनको मध्य क्षेत्रबाट बाहिरियो कोरोना, नयाँ संक्रमित परेनन् फेला
चीनको मध्य क्षेत्रमा स्थानीय रुपमा प्रसारित कोरोनाभाइरसका बिरामी नदेखिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले बुधबार जनाएको छ ।
आयोगले दैनिक सार्वजनिक गर्ने विवरणमा मंगलबार मध्य क्षेत्रमा पाँच जना विदेशबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको उल्लेख थियो ।
स्थानीय व्यक्तिमा संक्रमण भएका एक शंकास्पद व्यक्ति भित्री मंगोलियामा देखिएको आयोगले जनाएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु नभएको पनि आयोगको भनाई छ । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुमध्ये शाङ्घाई, फुजियान, गुआङदोङ र शाङ्सीमा कोरोना पुष्टी भएको थियो ।
मंगलबारसम्ममा चीनको मध्य क्षेत्रमा कूल तीन हजार ८०९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । तीमध्ये तीन हजार ५२३ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने २८६ जना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
आयोगका अनुसार विदेशबाट आएका संक्रमित कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको छैन । चीनको मध्य क्षेत्रमा हालसम्म ८६ हजार ४६९ व्यक्ति कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका थिए भने कूल चार हजार ६३४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अझै पनि ३०५ जना उपचारका क्रममा रहेका छन् जसमध्ये छ जनाको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर रहेको छ । “मेनल्यान्ड चाइना” भनेर चिनिने चीनको उहान समेत मध्य क्षेत्रमा कोरोनाले सबैभन्दा बढी असर पारेको थियो ।
सुरक्षा चिन्ताका कारण बाइडनको शपथग्रहण समारोहको पू...
चीनले ताइवान नजिक गर्‍यो लाइभ फायर अभ्यास (भिडियो)
चीन र भारतका ट्यांक जम्मा १०० मिटरको दूरीमा आमनेस...
इन्डोनेसियामा ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प, कम्तीमा २६ ...
संसारभरि सित्तैमा वाइफाइ दिने चीनको यस्तो योजना
चीनमा भीरमाथि बनाइयो ३० तल्ले भवन जति अग्लो पिङ, दह्रो मुटु भएकाले मात्र आँट्छन् (भिडियो)
चीनले बनायो चार सीट भएको विद्युतीय विमान
सफल भइसके पनि यस्ता कुरा पटक्कै भुल्नुहुँदैन, नत्र जीवन बर्बाद हुन बेर लाग्दैन !
के तपाईं प्रेममा पर्नुभएको छ, जान्नुहोस् प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ?
यी ८ काम, जसले तपाइँको जीवनमा समृद्धि ल्याउनेछ